NYI LYNN SECK 18+ DEN: နိုင်ငံရေး ကျွန်တှော့အမြင်
Posted by NLS at 3/23/2010 12:33:00 AM
Khin Burma said...
Whatabrilliant thoughts!! Enjoy reading it.
I completely and utterly agree. But no comment!!
Hope you can content with perspective.
Just take it easy... :)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မိပါတယ် :D
ပြောပေမယ့်လို့ ဒါမျိုးတော့ ရိုးမယ် မထင်ပါသည်။
တကဲ့ကိုလိမ်မာပါးနပ်စွာနဲ့ သုံးသပ်ပြတွားတာပါ အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံပါတယ်...
We havealeader who can unit all...Like Bogyoke Aung San..
All show their support in 1990
i dont think myanmar ppl are stupid idiots
they know right and wrong.
but they are living under fear..their minds are destroyed systematically
anyway.. i accept yr idea..
but i am sure we do haveavisionary leader...but no chance
I accept the words "compromise, negotiate, dialogue"
but who is denying to do so...
"မြန်မာလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ နှစ်ခြမ်းကွဲတတ်တာက အရိပ်လို လိုက်လာတယ်လို့ ဆိုရမလိုကို ဖြစ်နေပာတယ်။ ဘာလို့ ကွဲကြတာလဲ ဆိုတာကို သေချာ စမ်းစစ်ကြည့်တော့ စေ့စပ်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု မပြုလုပ်နိုင်တာ အဓိက ဆိုတာကို သွားတွေ့မိပာတယ်။ ဟိုးတုန်းက လက်ခံခဲ့ကြတဲ့ Yes မဟုတ်ရင် No ပဲ ဆိုတဲ့ ဝာဒကြီးက ယနေ့ထိ ကြီးစိုးနေဆဲ ဖြစ်တာကိုလည်း သတိပြုမိပာတယ်။"
"Yes စစ်စစ် No စစ်စစ် တွေဟာ အစွန်းရောက်တဲ့ သဘောမျိုးကိုတောင် ဆောင်လာပာပြီ။"
sometimes we cant stay in neytral...sate lasi...
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြင်အားလုံးကို အားလုံးကို ဘဝင်ကျလှတယ်လို့ မဟုတ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးထဲမှာ ပြောသလိုပါပဲ။ လူတိုင်းမှာ သဘောကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ သမိုင်းအမြင် ဆောင်းပါးတွေကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ မင်းတုန်းမင်း၊ ကနောင်နဲ့ ရေမြုပ်ဗုံးကိစ္စအတွက် ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဓ်လောက် ဖတ်စေချင်တယ်။ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲံ ကိုညီလင်းဆက်အနေနဲ့ ဒီဆောင်းပါးက အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အသုံးကျမှာပါ... အောက်က လင့်မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ http://www.ashinkumara.com/2009/11/black-dream-white-dream.html
totally agree and like to read.
I don't understand political thinking way but i understand your pointing.
နိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်း အကိုရယ် ကျွန်တေ်ာတို့က ပဒေသရာဇ်အုပ်စိုးမှုကနေ ဆင်းလာတာ ..တကယ်တော့ နာမည်လေးသာပြောင်းသွားတာ နိုင်ငံရေးအသိရှိဖို့ဆိုတာ ပညာရေးကောင်းမှ ပညာကောင်းကောင်းသင်ခဲ့ရမှလို့ ထင်တာပဲဗျ .. ( အံ့သြစရာကောင်းတယ်နော် ဦးနုတို့ သခင်သန်းထွန်းတို့ သခင်စိုးတို့ အားလုံးထောင်ကျတုန်းက တစ်ထောင်တည်းရယ်)
@Ko Ko ကျွန်တှော ဆိုလိုတဲ့ Neutral ဆိုတာ ဆိတ်လစိလို ဟိုပြေးကပ် ဒီပြေးကပ်တဲ့ သဘောမဟုတ်ဘူး ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောတာပာ။ နိုင်ငံရေးဟာ အရေးကြီးပာတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျန်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကဏဿဍတွေလည်း ရှိပာသေးတယ်။ ကိုကိုပြောတဲ့ တရားမမျှတမှုကို မဆန့်ကျင်တာဟာ တရားမမျှတမှုရဲ့ ဘက်ကို လိုက်တာပဲ ဆိုတာက ကျွန်တှော အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Yes မဟုတ်ရင် No ပဲ ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ သွားတူနေပာပြီ။ ဘယ်သူတွေ ပြည်သူအတွက် ဘယ်လောက် လုပ်နိုင်ကြတယ် ဆိုတာက အခုအခြေအနေမှာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပာဘူး။ စောင့်ကြည့်ပာ သမိုင်းက စကားပြောပာလိမ့်မယ်။
@Ashinlokapala ကျေးဇူးတင်ပာတယ်ဘုရား။ တကယ်တမ်းကတော့ အဲဒာလေးတင် ရေးရတာ အားမရပာဘူးဘုရား။ ပျင်းလဲပျင်းလို့ တိုတို ရေးမိပာတယ်။ မင်းတုန်းမင်းဟာ ဘာသာရေး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို လက်ခံပာတယ်။ ဒာပေမယ့် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ စစ်ရေးကိုတော့ ပီပီပြင်ပြင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာပာ။
@Littlebroke ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တှောတို့ နိုင်ငံရေးကို ပညာတစ်ခု အနေနဲ့ မသင်ခဲ့ရဘူး။ ပညာရေးကလည်း မကောင်းခဲ့ဘူး။ ဒီအတွက် စိတ်ခံစားမှု ပိုများတဲ့ emotional politic တွေဘက်ကို ရောက်ကုန်တယ်လို့ မြင်ပာတယ်။
ထင်မြင်ချက် ပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပာတယ်။ ကျွန်တှော တင်ပြတာဟာ ကျွန်တှော မှန်တယ်လို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပာ။ ကျွန်တှော့ ခံယူချက် ထင်မြင် ယူဆချက်သာ ဖြစ်ပာတယ်။
ကိုယ်မှန် သူမှား ဆိုပြီး နှစ်ပောင်းများစွာ မပြေလည်တဲ့ ကိစဿစတစ်ခုကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ညှိုးထိုးနေကြတာနဲ့ အဖြေဟာ ဘယ်တော့မှ မရခဲ့ပာဘူး။ သမိုင်းဟာ ပြန်ပြင်လို့ မရပာဘူး။ သမိုင်းဟာ မှတ်သားစရာနဲ့ သင်ခန်းစာ ယူစရာသာ ဖြစ်ပာတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျန်ခဲ့သော ဖြစ်နေသော အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်စပ်ပြီး အဖြေထုတ်ကြည့်တဲ့ သဘောပာ။
ကောင်လေး... အရမ်း အရမ်းကို တော်နေတယ်... ဖမ်းသတ်ပြီး ချက်စားလိုက်မှ နဲ့ တူတယ်...
ကိုယ့်အသင်းမှာ ရှိတဲ့ လူတှောတစ်ယောက် အမြင်မတူလို့ ထွက်သွားတာ ထွက်ပလေ့စေ ဘာဖြစ်လဲ ကျန်တဲ့လူတွေ ရှိသေးတာပဲလို့ ဆိုလိုချင်တာလည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သေသေချာချာ ပြောချင်ပာတယ်။
Firm တစ်ခုက တစ်ယောက်ယောက် ထွက်ခွာသွားမယ် ဆိုတဲ့ If situation ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
၁) အဲဒီလူ နေရာမှာ ဆက်ခံနိုင်မယ့် အဲဒီလူလို တှောတဲ့သူတွေ အရံသင့် ရှိနေဖို့ မဖြစ်နေ လိုအပ်တယ်။
၂) လူပြောင်းခဲ့ရင် အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲဖို့ Plan အဆင့်ဆင့် ချမှတ်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်။
၃) အဲဒီ လူကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိ လူစုလည်း ရှိဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို အဓိက ပြောချင်တာပာ။
ကိုယ့်မှာကျန်ခဲ့မယ့် လူတွေကလည်း ထက်မြက်မှုမရှိ ဘာမှလည်း မလုပ်နိုင် ဆိုတဲ့လူတွေ ဆိုရင်တော့ အရည်အချင်း ရှိတဲ့သူတစ်ယောက် ထွက်သွားမှာကို မတတ်နိုင်ဆုံး တားဆီးရမှာ ဖြစ်ပာတယ်။ မတားဆီးနိုင်လို့ ထွက်ခွာခွင့် ပြုခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က အားအများကြီး ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။
အဲဒီလို တားဆီးတဲ့ အခြေအနေမှာ ကျွန်တှော ပြောတဲ့ Situation တွေ ရှိလာနိုင်ပာတယ်။ ကိုယ်မှန်+သူမှား=ရန်သူ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းထက် ကိုယ်လျော့+သူလျော့=ရလဒ်တစ်ခု ဆိုတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို အဓိကထား ပြောချင်တာပာ ခင်ဗျာ။
@itmgmg အောက်အီအီးတောင် မအွတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေပမယ်။ ခွင့်လွှတ်ဘာ ခွင့်ပြုဘာ :D
သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်အမြင်နဲ့ တင်ပြသွားပုံလေး ကောင်းတယ်။
''ဘယ်မှာလဲ ခောင်းဆောင် (၂) (၃) (၄) (၅) ဘယ်မှာလဲ Plan (B) (C) (D) (E)။ နံပာတ်(၁) ခောင်းဆောင်ကို ဖမ်းလိုက်ရင် ဘယ်သူက ဆက်ခောင်းဆောင်မယ်၊ နံပာတ်(၁) အစီအစဉ် ပျက်သွားရင် ဘယ်လို အစီအစဉ် ဆက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ အရာတွေကို မတွေ့ရဘူး။'' ဟုတ်တယ်။
သတိထားမိသလောက် စင်္ကာပူက လူမွေးတော်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ လီကွမ်ယု၊ ဂိုချောက်တောင်၊ ပြီးတော့ လီရှန်လွန်း ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးရှိသူ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အနောက်မှာ backup ရှိနေတယ်။ ရှိနေအောင်လည်း train လုပ်ထားတယ်။ နောက်လူတွေက ရှေ့လူတွေကို မမှီဘူးဆိုပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် ကြီးပွားတိုးတက်ကောင်းစားဖို့ စွမ်းသလောက်လုပ်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။
အဲဒီနေရာမှာ ပြောတဲ့ ဘောလုံးအသင်းတောင် အစားထိုးချင်လာပြီ။
``စက်ကြီး ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း နောက်က ဘီးအားလုံး ပောက်နေရင်ဖြင့် ခရီးမတွင်ပာဘူး။´´
ဟိုစကားလေး သွားအမှတ်ရမိတယ် :D
ဘယ်သူက အဲဒီသစ်ပင်ရဲ့အရိပ်က ကောင်းတယ်လို့ ပြောမှာတဲ့လဲ...။
အခုလို ဆွေးနွေးကြ၊ ဖလှယ်ကြ၊ တိုင်ပင်ကြရင်းနဲ့ပဲ..
brilliant and interesting note...i agree with you generally....
one of the things i noticed is that we have been so oppressed that whenever we hear the word 'politics', we usually say 'i don't know politics'....we tend to keep politics atadistance from ourselves....that's probably due to fear but i believe that we should try to understand politics, at least implicitly....
Bravo Ko NLS!
လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ရေးသားတင်ပြပုံကြောင့် အရသာတစ်မျိုးနဲ့ ခံစားလိုက်ရသလို အတွေးတချို့လည်း ရလိုက်ပါတယ်။ သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုညီလင်းဆက်လိုပဲ အခြားလူတွေလည်း သိကြမယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ ဆိုရင်ပေါ့လေ။ ပြောချင်တာက ကိုညီလင်းဆက်တို့၊ ကျွန်တော်တို့လို သာမန်ပြည်သူတွေတောင် သိနေကြတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံကြီးကို ဦးဆောင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီအချက်တွေကို မသိနိုင်ကြဘူးလား။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိရင်တောင် ဘေးမှာရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ အကြံပေးတွေကတော့ သေချာပေါက်သိမှာပါ။ တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ဗျာ... မသိလို့ ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး၊ သိသိကြီးနဲ့ ဖြစ်နေကြတာလို့ ဆိုချင်တာပါ။ ဘာကြောင့် သိသိကြီးနဲ့ လုပ်နေကြသလဲဆိုရင် (ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ပါ) သူတို့ဘာသာ ပါတီကဘယ်လို၊ အဖွဲ့အစည်းကဘယ်ပုံ ပြောနေကြပေမယ့် တကမ်းကတော့ “ငါ” ဆိုတဲ့ အတ္တတွေကြောင့်လို့ မြင်မိပါတယ်။ တစ်ယောက် တစ်ငါဆီဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် “ငါတို့” ဆိုတဲ့ဆီကို မရောက်လာတော့ဘူး။ “ငါတို့” ဆိုတဲ့အဆင့်ကို မရောက်လာတဲ့အတွက် “ငါတို့မြို့” “ငါတို့တိုင်း” “ငါတို့ဒေသ” “ငါတို့နိုင်ငံ” ဆိုတဲ့အဆင့်တွေကို မရောက်လာတာ ဆန်းတော့မဆန်းလှပါဘူး။ အမြင်မတူတာတွေကို လက်ခံပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ် ရှိကြမှာပါပဲ။ အဲဒီလို အမြင်မတူတာကိုလည်း လေးစားရပါမယ်။ ငါနဲ့မတူဘူးဆိုပြီး ငါ့ရန်သူပဲလို့ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒါကိုတော့ နားလည်ကြသင့်တယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘဲ အများအတွက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အမြင်ကို ဦးစားပေးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အများအတွက် ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းမလဲ၊ ဘယ်ဟာက ပိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကိုညီလင်းဆက်ပြောခဲ့သလို ဘာတွေဘယ်လို အရေးကြီးတယ်ပြောပြော အားလုံးမျှမျှတတ ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်မှ အဆင်ပြေမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး ညီညွတ်ကြပါမှ၊ အဆင့်အတန်းမြင့်ကြပါမှ၊ စည်းကမ်းရှိကြပါမှ မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်း စည်းကမ်းရှိတဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့် နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီမိုကရေစီမှ မဟုတ်ဘူး။ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းပေးတဲ့စနစ်နဲ့ သွားရင်လည်း လူမွေးလူရောင်ပြောင်ဖို့ မမြင်မိကြောင်းပါ။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ အမြင်မတူသူတွေကိုလည်း ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုညီလင်းဆက်လည်း အမြင်လေးတွေ ထပ်ပြီး ရေးနိုင်ပါစေဗျာ။
YMBA က နေ GCBA တဖြည်းဖြည်း ဖဆပလအထိ ဘုံရန်သူရှိရင် ညီညွတ်တယ် စီးလုံးတယ် ဒုက္ခတွေခါးစည်းခံပြီး ပြင်းထန်တယ် အောင်မြင်လာရင် ကွဲတယ်။အချင်းချင်းချကြတယ်။ ပြင်ပလောကမှာလဲ မြန်မာတွေ စီးပွားရေးပေါင်းလုပ် အောင်မြင်ရင် အမျိုးချင်းသော်မှပြဿနာတက်တယ် ကွဲတယ်။ ရန်သူရှိမှ လက်ညိုးထိုးရမှ အပြစ်ပြောရမှ ဆရာဝင်လုပ်ရမှ ကိုယ်ဝင်ပါရမှ ဆိုတဲ့ စိတ်က မြန်မာ ဆိုတာဖြစ်နေသလိုဘဲ နော်
ဒီလိုဖြစ်အောင်အဓိက ဘယ်သူ ဖန်တီးတယ်ဆိုတာ
မတရားမှုကို လူထုက သိပါတယ်။
အများကြီး ပြောချင်ပေမယ့် အစ်ကိုအတော်များများ ပြောပြီါ်သားဖြစ်နေတာမို့
@Ashinlokapala : You may refer to following wiki link...
good enough points to figure out. thanks for sharing your view.
အခုတစ်လော အထင်ကရ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ ကြီး တစ်ခုရဲ့ ကွဲကြ၊ ပြဲကြ၊ အချင်းချင်း ဗြောင် အပုတ်ချကြ၊ ဆော်ကြ၊ ပလော်ကြတာတွေ တွေ့ နေ၊ ကြားနေရတာ၊ စိတ်လဲကုန်တယ်၊ စိတ်လဲပျက်တယ်။ အရင်းစစ်လိုက်တော့ ဘာလုပ်မယ်၊ ရှေ့ဘယ်လို ဆက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ strategy ရှိလို့ပြောနေကြတာ မတွေ့ ရပဲ ဂုဏ် သိက်ခါ အတွက် လို့ပြောလိုပြော၊ ရပ်တည်မှု အတွက်လို့ပြောလိုပြော၊ ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော် စိတ်ပျက်ပါရဲ့။ ဘယ်လိုလုပ် အားကိုးရ မလဲတောင် မသိတော့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ရှေ့လုပ်ရမဲ့ နည်းဗျူဟာ (strategy) ကို ဆွေးနွေးနေတာ မဟုတ်ပဲ ငါဆိုတဲ့ အတ်တ တွေနဲ့ခြေကန် ငြင်းနေ ကြတာပဲ။ လူထုကတော့ မျက်လုံး လေးတွေ ကလယ်ကလယ် နဲ့ ပေါ့။
ခင်ဗျားဟာ သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ သမိုင်းကို သေသေချာချာသိတဲ့ (၀ါ) သေသေချာချာလေ့လာနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ၊ သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်ရင်ထဲမှာ ဒီလိုမျိုး အတွေးအခေါ်တွေ ရှိနေမယ်လို့ ခင်ဗျားထင်သလား၊ သူတို့တတွေရဲ့ နစ္စဓူဝ စားဝတ်နေရေးအမှုပေါင်းများစွာ ဖြေရှင်းနေရချိန်မှာ ကြားနေ၀ါဒတို့၊ yes တို့ no တို့ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားချိန်၊ လေ့လာချိန်မရပါဘူး။ ကျွန်တော့် မြန်မာတွေဟာ ပြန်လည်ငြင်းခုံခွင့်မရတဲ့ စနစ်တစ်ခု (တစ်ခုထက်ပိုသော)နဲ့ နေလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းရာချီနေပြီဆိုတာ ပိုသိမှာပါ၊ သာမန်ပြည်သူတွေ သိဖို့၊ နားလည်ဖို့ဆိုတာ ဒီထက်ပိုထက် ပွင့်လင်းတဲ့ ရေးသားမှုမျိုးကို ထုတ်ဝေ၊ ဖြန့်ဝေနိုင်မှ ရမှာပါ၊ ခင်ဗျားတို့ ပိုနားလည်မှာပါ၊
please let me add some thought.
If the Burmese wanted to be united, they should be in the "One System" or "One Party".
Otherwise, you will Still be "Alone".
If I ask you that "for the sake of Unity, Do You want to join the NLD or any name party?" What will you say?
So Like in USA, they only have2parties, Republican or Democrat.
You can only have2choices, No 3rd choice. They don't havealot of parties.
You like it or not, you have to choose.
This is the highest political system.
‘‘why’’ကို ရိုးရှငျးစှာ တငျပွသှား၍ လေးစားပါသညျ။
ဘာကွောငျ့ ကို ပျေါလှငျ အောငျ ပွောပွခွငျးအတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျပါသညျ။
အလားတူ ‘‘Why’’ မြား ရေးသားပါဉီး။
ခင်ဗျားက သာမန်ပြည်သူမှ မဟုတ်တာ ကိုညီလင်းဆက်ရယ်။ သာမန်ပြည်သူတွေမှာ သာမန်အတွေး အခေါ်အနေ သာမန်နေရာ သာမန် ဘ၀ဆိုတဲ့ အရာတွေပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သာမန်လို ပဲတွေးမှာပဲ။ အခုဟာက သာမန် လူတွေက သာမန်နေရာ မနေကြ မလုပ်ကြပဲ ကိုယ်နဲ့ မတန်တဲ့နေရာမှာ သွားနေ လုပ်နေကြလို့ပါ။ သာမန်ဆိုတဲ့ အရာတွေလောက်သာ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကျယ်ပြန့် ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေ မှာဝင်လုပ်နေကြတော့ ခရီးဆုံးကို မတွေ့ရတာဖြစ်နေတာ။ တကယ်တော့ ဗမာ့အရေးမှာ သာမန် လူတွေများနေလို့ပါ။ ပြည်ပမှာဆို ပိုဆိုးပေါ့။ သာမန် မဟုတ်တဲ့လူ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်။
အဖြစ်မှန်တွေ ကို ထောက်ပြ သွားတာ အလွန်အင်မတန်မှ ကောင်းပါတယ်...
ဇော်ဂျီ ၂ဝဝ၉ တင်လို့မ၇တာ နဲ့ နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီးဖတ်သွားပါတယ်
သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်းဖြစ်နေတာလည်း ထည့်တွက်ပေးပါဦး အစ်ကိုရယ်
Politics is not about ranting old victories or following self claimed visionary leaders. It is team effort concerned the whole population. Every citizen holds responsibility for the state's welfare and development. Yet, we never hadasystem of politics in our country due to the nature of our race and local customs. A population getsagovernment system it deserves and it isafact. If we wantastate of freedom and democracy, we need to show we are responsible and intelligent citizens.
၁။ အရေးအသားညက်ညော၊ စာဖတ်သူအား သိမ်မွေ့စွာဆွဲခှောနိုင်။
၂။ အတွေးအခှောညံ့။ ယောင်တောင်တောင်၊ ဝားတားတားများအား ပို၍ ဇဝေဇဝာ ဖြစ်စေနိုင်။
၃။ နေရာတိုင်းတွင် “Yes” “No” တို့သည် အစွန်းရောက်သည်ဟူသော ပေတံကို သုံး၍မရ
တစ် နှင့် တစ် ပောင်းခြင်းသည် နှစ် မှလွဲ၍ မည်သည့်အဖြေမှ မထွက်နိုင်၊ တစ်ခုတည်းသော အဖြေသာရှိ။
၄။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခြင်းကြောင့် ညီလင်းဆက် မှ နအဖ မှထောက်ခံခြင်းအား ကန့်ကွက်ရန်မရှိ။
သို့သော် ကြားနေဟူသော၊ သာမန်ပြည်သူပြည်သားဟူသော အရေကို မခြုံသင့်။
(ဆောင်းပားတစ်ပုဒ်လုံးတွင် မျှတစွာတွေးခှောထားသည်ကို မဖတ်ရသဖြင့် နအဖ အားထောက်ခံသည်ဟု ကောက်ချက်ချ။ အဖေမှာ တပ်ထဲမှ ဖြစ်သဖြင့် စစ်တပ်အားထောက်ခံသည်ဟု ယူဆ။)
၅။ ဆောင်းပားတစ်ပုဒ်လုံးကို ခြုံ၍ဖတ်လိုက်သှော NLD အား ပုတ်ခတ်ထားခြင်း၊ ဒှောအောင်ဆန်း စုကြည်အား ပာတီမှထုတ်ပစ်စေလိုခြင်း တို့အား သွယ်ဝိုက်စွာ ရေးသားထားကြောင်း မြင်တွေ့ရ။ ဒှောအောင်ဆန်းစုကြည်အား သာမန်ပာတီ ခောင်းဆောင်အဖြစ် သဘောထားခြင်းသည် စစ်တပ် ကိုထောက်ခံသောသူတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း(အကြောင်း ပြချက်မရှိ၊ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ) မုန်းနေခြင်းကို ပှောလွင်ထင်ရှား။
ပြသဿသနာ၏ အရင်းအမြစ်ကို ( NLD ခောင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များကို ဖမ်းဆိးထောင်ချ၊ နေရာတကာ အာဏာကိုအသုံးချ၍ ဖိနှိပ်နေသော စစ်တပ်) အပြစ်မမြင် မတို့မထိပဲ လက်တလောဖြစ်ပှောနေသော အခြေအနေများ ပှောသုံးသပ်ကာ NLD ကို ဝေဘန်ပုတ်ခတ်ထား။
Binary မှာဆို တစ်နဲ့တစ် ပောင်းတာ 10 ထွက်တယ်ခင်ဗျ။
NLD ကို မထောက်ခံတာနဲ့ပဲ နအဖ ကို ထောက်ခံတာ ဖြစ်ကောလား။
၁၀ တန်းစာကျေတဲ့သူတိုင်း ၁ နဲ့ ၁ နဲ့ ပေါင်းတိုင်း ၂ မထွက်ဘူးဆိုတာ သိမယ်ထင်ပါတယ်။
NLD ကိုယ်တိုင်ကကော ဘယ်လောက် liberal ကျပါသလဲ။ (ကျွန်တော်သေချာမသိပါ)
၂၁ ရာစု နိုင်ငံရေးဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆီကို ဦးတည်သွားနေတယ် ဆိုတာကော သိပါသလားခင်ဗျာ။
ညီလင်းဆက်ရေးထားတာ အကုန်မမှန်ရင်တောင် ပညာတတ်လူငယ်အများစုက လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အပေါ်က အချက်5ခုလုံး မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် NLD ရဲ့ Plan – B က ဘာတုံး………
ဟိုဟာ မဟုတ်ဘူး ပြောရင် ဒီဟာကို ဟုတ်တယ်လို့ ပြောတာ ထင်တယ်။
နိုင်ငံခြားကနေ ပါးစပ်အယားပြေရုံ မကြောက်ကြနဲ့ ထချကြပါလို့ အော်မနေကြပါနဲ့လား ပြောရင် "မချကြနဲ့။ ငြိမ်နေကြ။" လို့ ပြောတာလို့ မှတ်တယ်။
ဦးနှောက်တွေက အဲဒါမျိုးပဲ မဆိုင်တာ လိုရာဆွဲတွေးတော့တယ်။
ကိုဇီဝက (ဆေး ၂) သို့
၁။ မဆလ ဦးနေဝင်းအား ကြံဖန်၍ ချီးကျူးဖူးခြင်း (မြန်မာစာ ကိစဿစနှင့်ပာတ်သက်၍) ကြောင့် နအဖ အားထောက်ခံသည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်ပာသည်။ တိတ်တခိုးထောက်ခံခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပာသည်။ ကိစဿစမရှိပာ။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲနိုင်ပာသည်။
၂။ “တစ်” နဲ့ “တစ်” ပောင်းတိုင်း “နှစ်” မထွက်ဘူးဆိုရင် ဘာတွေထွက်သေးလဲ ခင်ဗျ။ “တစ်” နဲ့ “အနှုတ် တစ်” နဲ့ပောင်းတယ်တော့ မလုပ်နဲ့နှော။ ကျနှောသေချာရေးထားတယ်။
၃။ NLD ဘယ်လောက် liberal ကျလဲတော့ ကျနှောလဲ သေသေချာချာ မသိပာ။ ဒာပေမဲ့ ဒီပဲယင်း လိုကိစဿစမျိုးကိုတောင် သင်ပုန်းချေပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဘို့ တောင်းဆိုတာကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် နအဖ ထက်တော့သာသည်ဟု အကြမ်းဖျဉ်း ကောက်ချက်ချနိုင်ပာသည်။ ဒီပဲယင်း ကိစဿစကို ပော့သေးသေး ဟု သဘောထားလျှင်တော့ ကိုယ့်ကိုကို ဘယ်နေရာမှာ ရပ်နေလဲ ဟုပြန်မေးခွန်းထုတ်သင့်သည်။
၄။ ပူးပောင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆိုတာ ၂၁ ရာစုကျမှ ပှောလာတယ်လို့ထင်ထားပာသလားခင်ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ ယုံကြည်မှုကို အရင်မတည်ဆောက်ပဲနဲ့ အဲဒာတွေလုပ်လို့ရတယ်လို့ ထင်ပာသလားခင်ဗျာ။
က) ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အား အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ပယ်ဖျက်ခြင်း
ခ) အဖွဲ့ဝင်များအား မတရားသဖြင့် နည်းမျိုးစုံ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထောင်ချခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးအောင်လုပ်ခြင်း
ဂ) ဒီပဲယင်း ကဲ့သို နိုင်ငံရေး massacre အလုပ်များကို လုပ်ဘို့ ဝန်မလေးခြင်း
အစရှိသော ဂုဏ်ပုဒ်များနှင့် ပြည့်စုံတဲ့ နအဖ ကို NLD ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဘို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေဟာ ပူးပောင်းဆောင်ရွက်ခြင်လို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးချင်လို့ မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာ။
၅။ NLD လုပ်ရပ်များအား အားရသည်ဟု မထင်စေလိုပာ။ ဒာပေမဲ့ ….
က) လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ ခောင်းဆောင် တှောတှောများများကို ဖမ်းထားတယ်။
ခ) ရုံးခန်းတွေကို ဖွင့်ခွင့်မပေးဘူး။
ဂ) ပာတီဝင်တွေကို နည်းမျိုးစုံ ခြိမ်းခြောက်ပြီး နှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်။ (ဘာကျန်သေးလဲ …. ?)
အဲဒီလိုလုပ်တဲ့ နအဖ ကို တော့ အပြစ်မမြင်။ အလုပ်ခံထားရတဲ့ ပာတီကျတော့ Plan A, Plan B မရှိလို့ဆိုတော့လဲ ….
၆။ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးသည် ပြည်သူပြည်သား အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပာသည်။ NLD တစ်ခုတည်း၏ တာဝန်ဟုမထင်စေလိုပာ။ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပာသည်။
ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ democracy ရဖို့မရဖို့ဆိုတာ NLD နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ကခံယူထားလို့ပါ။ ဒီခရီးလမ်းဟာ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး လျောက်လမ်းရမည့် ခရီးကြမ်းပါ။ ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ အကျင့်တွေကို မပြင်မချင်း NLD အာဏာရလည်း နအဖလိုပဲ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါကြောင်း။
@kyawluthar ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာလေးကို နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပေးပါဦး။ ဘာကို ခေါ်တာလဲ။ မသိလို့ "အ" လို့ မေးတယ်လို့ သဘောထားပြီး ရှင်းပြပေးပါဦး။
ဒီဂဏန်းပေါင်းစက်တွေက သည်လိုပဲ ၁ နဲ့ ၁ ကလွဲလို့ ပိုပေါင်းလို့မရတော့ဘူး.. ဂဏန်းများလာရင် RAM မနိုင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ သည်းခံလိုက်ပါ။
ကိုအမည်မသိ နှင့် The watcher သို့
binary မှာ 10 ဆိုတာ decimal က2နဲ့အတူတူဖြစ်ပာကြောင်း။ အခှောအဝှောသာကွဲပာကြောင်း။ ရေ၊ water၊ ပာနီ အတူတူဖြစ်ပာကြောင်း။ သိသည်ထင်၍၊ နောက်သည်ထင်၍ ပြန်၍ မဖြေခြင်းဖြစ်ပာသည်။ သို့သှောလည်း ဇဝေဇဝာ ဖြစ်ကုန်မည့်သူများတိုးလာမည်စိုး၍ ဖြေရှင်းလိုက်ပာသည်။
ကိုအမည်မသိ သို့ (အတူတူပဲလား၊ တစ်ယောက်စီပဲလားတော့ မသိပာဘူး၊ နာမည်လေး ဘာလေးနဲ့ လုပ်ပာဗျာ၊ ခင်ဗျားကို ဘယ်သူမှ trace မလုပ်ပာဘူး၊ နာမည်လိမ်နဲ့လည်း ရပာတယ်၊ သိပ်မကြောက်ပာနဲ့)
ဒီမိုကရေစီ မှာဆိုရင် ပြောစရာရှိရင် အခုလို နာမည်မဖှောပဲနဲ့ ပြောနေစရာမလိုဘူး။ ကြောက်နေစရာမလိုဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ပြောပိုင်ခွင့်၊ ဆိုပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ခင်ဗျား အစိုးရရဲ့ ပှောလစီတွေကို မကြိုက်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဘန်လို့ရတယ်။ ခင်ဗျားမှာတော့ အင်တာနက်ပှောမှာတောင် လာဖမ်းပြီး ထောင်ချမှာ ကြောက်လို့ထင်တယ်။ နာမည်လေး ဘာလေးတောင် မဖှောရဲဘူး။ နောက်တာနှော… စိတ်ဆိုးနဲ့။ အကြမ်းဖျဉ်း ရှင်းပြတာပာ။
"စီးပွားရေးစနစ်သာမှန်မယ်ဆိုရင် Democracy, Autocracy, Communism စတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဘာသုံးသုံးဖြစ်တယ်"လို့ အဆိုတင်ရင် ဆွေ့ဆွေ့ခုန်သွားမယ့်သူတွေ အတှောများမှာပဲနှော။
10 B=2 D ကတော့ နောက်လိုက်တာပာ။
ဦးနေဝင်းကိုတော့ ကျန်တာသာမကြိုက်တာဗျ။ တ နဲ့ တစ် အသုံးကိုခွဲခြားတာတော့ (သူအကြံပြုတာသာမှန်ရင်) ထောက်ခံပာတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူအာဏာလက်ကိုင်ရှိစဉ်က ချမ်းသာတဲ့ပမာဏကို အခုနအဖကလူတွေ ချမ်းသာတာနဲ့ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပာဦး။ နောက်ပြီး UK/US က ဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ယှဉ်ပာဦး။ (ကျုပ်တော့ ထပ်ရှင်းရဦးမယ်နဲ့တူပာတယ်) ကျုပ်ပြောတာဟုတ်မဟုတ် အခုNLD ခောင်းဆောင်ဘိုးဘိုးကြီးကိုမေးကြည့်လိုက်ပာ။
ကျွန်တှောမကြောက်မိသေးပာဘူး။ Anonymous သုံးတာက နေရာတကာ နာမည်မပာပာအောင်လုပ်ပြီး တတိယနိုင်ငံမှာပျှောနေအှောနေတဲ့သူတစ်ချို့နဲ့ ကွဲပြားအောင်ပာခင်ဗျာ။
ဒာနဲ့ ကိုကျှောလူသာဆိုတာ ကိုညီညီလင်းများလားခင်ဗျာ။
နိုင်ငံရေး နဲ့ စီးပွားရေး မှာ စီးပွားရေးက အရင်လာတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတာပဲ။ စီးပွားရေး ပှောမှာ အခြေခံပြီးတော့မှ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေက သင့်လျှောတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ ဖန်တီးကြတာလို့ ဖတ်ဖူးပာတယ်။
ဘုရင်စံနစ်၊ အာဏာရှင်စနစ်၊ အရင်းရှင်စံနစ်၊ ကွန်မြူနစ်စနစ် ထဲမှာဘယ်စံနစ်က ကောင်းလဲဆိုတာကတော့ တစ်ကမဿဘာလုံးမှာ မျက်မြင်ပာပဲ။ တွေးကြည့်နေစရာမလိုပာဘူးဗျာ။ ဘယ်စံနစ်ကဆိုးလဲ ဆိုတာလဲ တွေးကြည့်စရာ မလိုလောက်အောင်ကို ရှင်းလင်းနေတာပဲဗျာ။ ကျနှောတော့ မငြင်းချင်တော့ပာဘူး။
“တ” နဲ “တစ်” ကိုခွဲတာက ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းတယ် … ဟုတ်လား တကယ်က မြန်မာစာ ပညာရှင်တွေက လုပ်ခဲ့တာပာဗျာ … အဲဒီ ဦးနေဝင်း ကဘာသိတာ မို့လို့လဲ … အလွန်ဆုံး လက်မှတ်ထိုးပြီး အတည်ပြုပေးတာ လောက် လုပ်ပေးတာနေမှာပာ …. ထားပာတော့ သူပဲ လုပ်ခဲ့တယ်ထားဦး … နိုင်ငံခောင်းဆောင် တစ်ယောက်လုံး လုပ်ပြီး ဒာလောက်လေးလုပ်တာနဲ့ပဲ ချီးကျူးခြင်စရာကောင်းရောတဲ့လားဗျာ။ သူလုပ်ခဲ့လို့ တိုင်းပြည်ကြီး ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်သွားတာ နဲ့စာရင် အဲဒာကိစဿစက ဘာများ ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ စွမ်းဆောင် ချက်မို့လို့လဲ …. ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ရှုပ်အောင် မလုပ်ကြပာနဲ့ဗျာတို့ ….
မဆလ ခေတ်က ဝန်ကြီးတွေ၊ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ US/UK ကဝန်ကြီးတွေ ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ ကျနှော မသိပာ … ကျနှောသိချင်တာက တရားသော နည်းလမ်းဖြင့် ရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ ချမ်းသာတာ ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူး လားဆိုတာပာ ….
ကိုအမည်မသိ နှင့် ကိုကျော်လူသာ
"စီးပွားရေးစနစ်သာမှန်မယ်ဆိုရင် Democracy, Autocracy, Communism စတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဘာသုံးသုံးဖြစ်တယ်" ဆိုတာကို နဲနဲ လက်ခံတယ်။ အကုန်တော့မဟုတ်ဘူး။ အဓိကက နေရတဲ့ဘဝကို လူတွေအနဲနဲ့ အများ ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုဗျ။ စီးပွားရေးကောင်းလာရင် လူမှုအဆင့်အတန်းမျှလာရင် စီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရ၊ ဝင်ငွေခွဲဝေပေးမှု မျှတတဲ့ အစိုးရဆိုရင် ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးစနစ် အိုင်ဒီယာနဲ့ မဆို လူတွေလက်ခံမယ်မှာပဲဗျာ။ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်ကိုကြည့်ပါ။ ဘာစနစ် အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာက လက်တွေ့မှာကမ္ဘာအတိုင်းအတာနဲ့ ယတိပြတ်ပြောလို့မရတဲ့အတွက် ငြင်းနေရမယ့် ကိစ္စမှဟုတ်ကိုမဟုတ်တာဗျ။ ဒါပေမယ့် လူ့လောဘ နဲ့ အတောမသက် ကြီးပွားချင်စိတ်ကိုလည်း ဇတ်လွှတ်ထားပေးလို့မရပြန်ဘူးခင်မျ။ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ သဘာဝအခြေအနေ၊ လူမျိုးနိုင်ငံ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ အယူအစွဲ၊ တွေကရှိသေးတယ်။ အဓိကက လူတွေချမ်းသာရုံနဲ့မပြီး ရိုးရိုးသားသားနေနိုင်ပြီး စိတ်ကျေနပ်နိုင်ရဦးမယ် လို့မှတ်ယူပါတယ်။
ဦးနေဝင်းအကြောင်းတော့ စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးဗျို့။ စိတ်ဝင်စားရရင်လည်း သူတစ်ယောက်ထဲမှမဟုတ်ပဲ။ လူပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို နတ်ဘုရားတင်လိုတင် ငရဲမင်းခန့်လိုခန့် အကုန်မကောင်းရင် အကုန်ဆိုးတယ် ဆိုတဲ့ ၁ နဲ့ ၁ လိုက်ပေါင်းနေတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေကို ဖတ်ဖတ်နေရတာ ပျင်းစရာကြီးပါ။ အကုန်ကောင်းနိုင်သူမရှိသလို အကုန်ဆိုးတဲ့သူလဲရှိကိုမရှိဘူးဗျ။ လူတိုင်းက ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးနေကြတာပဲ။ အဓိကက ငါသာဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းအောင်ရေးမလဲဆိုတာတွေးဖို့လိုတာ။ ပိုမှန်တာက ငါတို့သာဆိုရင် လက်ရှိအနေအထားကနေ ပိုကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ တွေးရမှာလို့ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာပဲ။ နောက်တစ်ခုက
ဒီလိုကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ပြန်ထောက်မိ မေးမိတာနဲ့ အဖေတော်ခိုင်းတာမျိုးတွေကလည်း ကလေးကလားနဲ့ဗျာ။
အေးဗျာ ကိုကျော်လူသာ ခင်များ binary ဂဏန်းတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ဆိုတာပထမပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးကတဲက ကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်။ လူပုဂ္ဂုလ် တစ်ဦးကို အခြေပြုပြီး ဒီဘက်မဟုတ်ရင် ဟိုဘက်ပဲဆိုတာမျိုးက ၁ နဲ့ ၁ ပဲပေါင်းနေတာပဲကိုး။ ဂဏန်းသင်္ချာတီထွင်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေကို အားနာစရာဗျာ။
အကိုညီလင်းဆက် ရေးခဲ့သမျှ အမြင်တွေထဲမှာ ဒီတစ်ခု အကြိုက်ဆုံးပဲ ..
စိတ်ကုန်လို့ ကိုယ့်ကျောင်းစာပဲ ကြိုးစားနေတော့တယ် .. :)
Mon Mon HB said...
Suchanice article....
ထပ် ရေး ကြ ပါ ဦး
စိတ် ၀င်စား လွန်းလို့ပါ
ညီလင်းဆက် အဖေ က လေ တပ် ဗိုလ် မှူး ကြီး ခင် ဗျ
ဗိုလ် မှူး ကြီး မျိုး သန့်လေ
ဗျို့...ကို ညီလင်းဆက်...
စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ ဦးနု လက်ထက်မှာ တိုင်းပြည်ဟာ ဖရိုဖရဲ စဖြစ်တော့တာပါပဲ။ လို့ရမ်း မပြော ပါ နဲ့...
ဦးနု က နိုင်ငံရေး လုံးဝ လုပ် ချင် တာ မဟုတ် ဘူး ..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က အကြိမ်ကြိမ်အတင်း ဆွဲခေါ် လို့လုပ် ရ တာ...ဗိုလ်ချုပ် အတင်းဆွဲခေါ် တယ် ဆိုကတည်းက သူ့ အရည်အချင်းကော စိတ်ထားပါ သာမန် နိုင်ငံရေး သမားတွေထက် သာ လို့ပဲ ဆိုတာထင်ရှား တယ်...
ပြီးတော့ ဦးနု အသည်းအသန် ကြိုးစား လို့တိ်ုင်း ပြည်က ကောင်းတဲ့ ဖက်ကို အတော်ကြီး ပြန်ရောက်နေပြီ ... ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်း က သက်သက် အကြောင်း ရှာ ပြီး အာ ဏာ သိမ်းတာ...ဦးနု ရေးတဲ့တာတေစနေ သားကို ဖတ် ကြည့် ပါ ဦး ... သူ့ ခေတ်ကို မှီတဲ့ လူတွေက ဦး နုကြောင့် တိုင်းပြည် ပျက်ရ ပါ တယ် လို့ပြော တာ တခါ မှ မကြားမိ ဘူး.. ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်း ကိ်ု တပ်ကထုတ် ဖို့ဝိုင်း လုပ် တာ ကို ဦးနု က သနား ပြီး မထုတ် တာ ရယ် ... ကွန်မြူနစ်တွေကို ဖမ်းဖို့သူ ကော ဦးကျော် ငြိမ်း ပါ လက် နှေး ခဲ့ တာ တွေ ကို ကြည့် ပြီး သူတို့မှား ခဲ့ တယ် ပြော ရင် တော့ လက် ခံ တယ်။ ( ကြေးမုံ ဦးသောင်း ရေး တဲ့ ဘီလူး တို့ရွာကို ဖတ် )
တကယ် ဆို ဗျာ ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်း ကိုသနား တယ် ပဲ ထား ပါ ဦး ...တပ် က ထုတ် ပြီး သံအမတ်တို့သာသနာရေး ၀န်ကြီး လို မျိုး အ ဆိပ် မ ရှိ တဲ့ ရာထူး တစ် ခု လောက် ထွင်ပြီးပေး လိုက် လဲ ရ တဲ့ ဟာကို...ဒီနေရာ မျိုးမှာ ဘဘညွန့် တို့ဘဘ သန်းရွေ တို့က တော် တယ် ....
မြန်မာဆိုတာဒါပါပဲ..တစ်ယောက်က ပြောလိုက်သမျှကို နောက်တစ်ယောက်က ထောက်ခံ..နောက်တစ်ယောက်က ငြင်း...ဒီသုံးဦးကြားမှာ... လှည့်ပတ်ငြင်းခုန် ထောက်ခံနေတဲ့ ပတ်လည်ရိုက်နေတဲ့ သပွတ်အူထဲမှာ... ဘေးထိုင်ပီး ဆရာလုပ်..ဝေဖန်နေတဲ့မြှောက်ထိုးပင့်ကော်သမားတွေပဲစုနေတဲ့ လူတွေ....စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာမြန်မာဆိုသလိုဖြစ်နေပီဗျာ....
NLD Party က စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှု တွေလုပ်တယ်။
အဲဒီလိုလုပ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှု
ပြည်သူလူထုက အဲဒီအချိန်မှာ အစိုးရ ကိုမျက်မုန်းကျိုး
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ အစိုးရကိုထောက်ခံတာ ဆင်းရဲတဲ့
ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားကြည့်ရင် တစ်ခုခုတော့ သိလာလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ။
Arkar Myint said...
Sa yar gong pote dwe` ga lae` myar hla chi lar bya. How do you get all that titles? just curious to know. Do you title them yourself?
Ha ha ha this is justajoke. But jokes always have some meaning too.
သူတပါးကို လှောင်တယ် ဟုတ်လား.. ခင်ဗျားမှာ တိုင်းပြည်အတွက် သို့ လူအဖွဲ့စည်းအတွက် တစ်ခုခု ကောင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်လေးတွေ ရှိ်၇င် ပြောပြစမ်းပါ